Maraykanka, 26 December 2019
Khamiis 26 December 2019
Masjidka Soomaalida ee St. Paul oo la weeraray
Masjid ku yaalla magaalada Saint Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa sabtidii 21-ka December weeraray nin caddaan ah, sida ay sheegeen maamulka.
Askari Mareykan ah oo lagu dilay Afghanistan
Malitariga Mareykanka ayaa sheegay in maanta askari lagaga dilay dalka Afghanistan, balse ma bixin faa-faahin ku saabsan goobta iyo habka loo dilay.
Faaqidaadda: Codeynta Aqalke Hoose ee xil-ka-qaadista Trump
Aqalka Hoose oo u codeeyey in Trump xilka laga qaado
Codbixintii qodobka koowaad ayaa waxa natiijadiisu ahayd 230 mudane oo oggolaatay in madaxweynaha xilka laga qaado iyo 197 mudane oo diiday. Qodobka labaad ayaa waxa taageeray 229 mudane halka 198 mudane oo iyagu diideen
Ilhan Cumar oo sheegtay in deyn khafiifin loo sameeyey Somalia
Ilhan Cumar oo ka tirsan Aqalka Hoose ee koongareeska Maraykanka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in qaraar tirsigiisu yahay HR1158 lagu ansixiyey in dayn khafiifin loo sameeyo dalka Somalia.
Qodobada xil-ka-qaadista Trump oo maanta loo codeynayo
Dilalka Soomaalida oo kusoo badanaya Ohio
Gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa waxaa toddobaadyadii tagey kusii kordhayey dilalka loo gaysto dhallinyarada Soomaalida ah.
Dacwadda xil-ka-qaadista Trump oo toddobaadkan loo codeynayo
Aqalka Wakiilada oo dhameystiran ayaa la filayaa in ay todobaadkan u codeeyaan laba qodob oo ah dacwadda xil ka qaadista madaxweyne Trump.
Erdogan oo ku hanjabay inuu xirayo saldhigga Mareykanka
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Axaddii maanta ah ku hanjabay inuu albaabada u laabi doono laba saldhig oo militari oo Turkey-ga ku yaalla kuwaas oo ay isticmaalaan ciidamada Mareykanka ka dib markii ay Washington
Soomaali loo Tababaray Caawinta Dadka Xanuunsan iyo Maxaabiista
Tababar muddo sanad ah u socday arday Soomaali u badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada, tiradooduna ahayd ilaa 21 arday, ayaa xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Minneapolis ee gobalka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Guddi ansixiyey qodobada xil-ka-xayuubinta Trump
Guddi hoosaad ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka ee ay maamulaan dimoqraadiga ayaa maanta ansixiyey eedeymaha ku saabsan ku-xadgudubka awoodda iyo is-hortaagga ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump.
Keydka lacagaha qalaad ee Iran oo sii gurmaya
Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in cunaqabateynta Washington ee ka dhanka ah Iran ay si xun u wiiqday awoodda Tehran ay u heli karto isticmaalka lacagaha qalaad, ugana tagtay kaliya keyd lacageed oo ah 10 bilyan oo dollar.